China 304DQ DDQ abandayo liqengqiwe insimbi coil Ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
Izinto ezingama-304 DQ DDQ zisetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zempahla yasekhitshini engenasici, i-DDQ (umgangatho wokuzoba okunzulu): ibhekisa kwimathiriyeli esetyenziselwa ukuzoba okunzulu (ukuyila kwakhona), yile nto siyibiza ngokuba zithambile. Olona phawu luphambili lwezi zinto kukuphakama kwalo okuphezulu (≧ 53%), ubunzima obuphantsi (≦ 170%), inqanaba lokudla okuziinkozo kwangaphakathi phakathi kwe-7.0 ~ 8.0, ukusebenza ngokugqibeleleyo kokuzoba. Iinkampani ezininzi ezivelisa iithemos kunye neembiza ngokubanzi zinemilinganiselo ephezulu yokusebenza (IBHODI YOKUSEBENZA / ubukhulu bemveliso), kwaye umlinganiso wazo wokulungisa zi-3.0, 1.96, 2.13, kunye no-1.98 ngokwahlukeneyo.
Sino Stainless Capacity malunga I-coil ye-304 ye-DQDDQ ebandayo eqengqelekileyo, 304 DQ DDQ CRC
304 DQ DDQ Ibanga elifanayo ukusuka kumgangatho ohlukeneyo welizwe
Inkcazo: SUS304DQ SUS304DDQ S30408DQ 06Cr19Ni10DQ 0Cr18Ni9DQ S30400DQ.
Icandelo le-304DQ DDQ yeChemical ASTM A240:
C: ≤0.08, Hayi: ≤0.75 Mnu ：.02.0 ，Kr ：18.0～20.0 ，Ni ：8.0～10.5，　S ：-0.03 ，P ：.0.045 N0.0
Udibaniso (%):> 53%
Inkcazo malunga ne-DQ, iDDQ kunye nezinto eziqhelekileyo
Imathiriyeli ye-SUS304DDQ isetyenziselwa ubukhulu becala umlinganiselo wokuqhubekeka kwemveliso, ewe, umlinganiso wokulungiswa kweemveliso ezingaphezulu kwe-2.0 ngokubanzi kufuneka ugqithe iipasile ezimbalwa ukugqiba ukolula. Ukuba ulwandiso lwempahla eluhlaza alunakufikeleleka, imveliso inokuvelisa ngokulula iintanda kunye nokutsala xa kugqitywa ukuzoba iimveliso ezinzulu, ezichaphazela izinga lemfundo yeemveliso ezigqityiweyo, kwaye kunjalo kunyusa iindleko zabavelisi.
Izinto ngokubanzi: Isetyenziselwa izinto ngaphandle kwezicelo ze-DDQ. Lo mbandela ubonakaliswa ngobude obuphantsi (≧45%), ubunzima obukhulu (≦180HB), kunye nenqanaba langaphakathi lobungakanani beenkozo ze-8.0 ~ 9.0. Xa kuthelekiswa nezinto ze-DDQ, ubunzulu bayoUkuzoba ukusebenza kubi kakhulu. Isetyenziselwa iimveliso ezinokufumaneka ngaphandle kokuzolula, njengeepuni, amacephe, iifolokhwe, izixhobo zombane, kunye nemibhobho yentsimbi yohlobo oluthile lwetheyibhile. Nangona kunjalo, inenzuzo ngaphezulu kwezinto ze-DDQ kuba iipropathi ze-BQ zilungile, ikakhulu ngenxa yobunzima bayo obuphezulu.
Egqithileyo 316L 316 abandayo liqengqiwe coil intsimbi
Okulandelayo: Ikhoyili yentsimbi ebunjiweyo engama-316